Ny fiandohan’ny sivana aterineto tany Alemaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2020 2:51 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Deutsch, русский, English
Eo an-tomotry ny fanivanany ny aterineto ao aminy i Alemaina: toa fanapahankevitra iombonan'ny ny governemanta – fiarahamitantana goavana eo amin'ny antoko sôsialy-demaokraty (SPD) sy ireo mpitahiry ny nentindrazana ( (CDU-CSU) : ny alakamisy ny parlemanta no tsy maintsy mifidy ny rafitra sivana aterineto ho ajoro .
Ny minisitra misahana ny raharaham-pianakaviana, Ursula von der Leyen, no nanao ny fanokafana sy nitarika ny fifanakalozan-kevitra tao anivon'ny governemanta federaly alemàna momba ny hisakanana ireo tranonkala aterineto, ho ady atao amin'ny resa-betaveta sy ny fanararaotana ankizy. Ny hevitra ankapobeny dia ny hanangana rafitra sivana iray hahafahan'ireo manampahefana mibahana ireo votoaty miaty resaka veteveta sy fanararaotana ankizy. Ny birao federaly mpanadihady momba ny heloka bevava no hitantana ny lisitr'ireo tranonkala hobahanana, ary ireo mpanome tolotra fidirana amin'ny aterineto dia terena hametraka rafitra miafina ho an'ireo manampahefana.
Nalaky be dia nisy tambajotra matanjaka sy fanoherana an'ireny tetikasa ireny nijoro tao anatin'ny vondrompiarahamonin'ireo alemàna mpampiasa aterineto. Fanoherana tsy voafetra fotsiny ho an'ireo mpijirika sy ireo mpikatroka nomerika, fa lasa kokoa ho hetsika faobe iray nataon'ireo media, nahazo fanohanana midadasika be avy amin'ireo bilaogera sy ireo mpampiasa Twitter. Ny tenifototra #zensursula no nampiasain'ireo mpanao ilay fanoherana – tenifototra alemàna itambaran'ny fanampinanaran'ilay minisitra sy ny teny hoe ‘censure’, izay afaka ampitoviana amin'ny hoe #censursula.
Ny hetsipanoheran'ny daholobe dia hita tamin'ny endrika fanombohana fanangonantsonia ofisialy natao an-tambajotra ary nalefa ho an'ny parlemanta alemàna. Tao anatin'ny andro telo, sonia 50.000 no azo – ny isa ilaina mba ho azon'ny parlemanta dinihana ny amin'ilay fanangonantsonia nomena lohateny hoe „Lavina ny fanondroana sy ny fibahanana tranonkala aterineto“ [amin'ny fiteny alemàna toy ny rohy rehetra tsy asiana fanamarihana]. 6 herinandro no fetra manampanankery ny fanangonantsonia an-tambajotra iray ao Alemaina – tao anatin'io fepotoana io, olona 130.000 no nahavita sonia, nahatonga io fanangonantsonia io ho ny iray isan'ny nahangona sonia betsaka indrindra sy nahomby teo amin'ny tantara.
Tao anatin'ireo herinandro vitsivitsy farany, lasa feno asa famoronana misimisy kokoa ireo hetsipanoherana – tsy tambo ho isaina ireo bilaogera sy mpampiasa Twitter no nanjohy azy sy naneho hevitra tamin'ireo adihevitra natao tao anivon'ny governemanta ary ireo tohankevitra avy amin'ny ankolafy mpifandandrina. Marobe ireo mpilaza vaovao nahazatra no nandray ilay resaka ary nitatitra momba ireo hetsipanoherana natao tety anaty tambajotra. Najoro ny vondron'asa iray momba ny sivana, ary tamin'ny alàlan'ny wiki iray no narindra ilay hetsipanoherana, niampy lisitra fanapariahana imailaka, sehatra fifanakalozankevitra sy tamin'ny fampiasàna ny Twitter ary ireo bilaogy mazava ho azy. Ny tranonkala „Zeichnemit.de“ (“Ianao koa manaova sonia”) dia namorona pejy iray familiana natao hanazavàna ilay rafitra misaringodringotry ny fanangonantsonia, ary tamin'ny fanamoràna ny fanaovana sonia ilay fitakiana mba hahatonga azy ho mora idiran'ireo manana fahalalàna mampiasa ny aterineto.
Maherin'ny 500 ireo olona tonga nanatrika ny resaka ofisialy nataon'ny governemanta ho an'ny mpanao gazety momba ilay sivana kasaina hapetraka amin'ny aterineto – ka maro no nanararaotra ilay fotoana mba hihetsehana sy hanehoany ny ahiahin-dry zareo. Raha ny marina dia nanomboka nanatrika ny sasantsasany tamin'ireo fisehoana imasom-bahoaka nataon'ny minisitra “von der Leyen” ireo mpanao fihetsiketsehana, tamin'ny filanjàna sorabaventy sy takelaka mba hisarihana ny saina momba ny fanakendàna ny fahalalahana mahazo vaovao ao Alemaina.
Tsy nionona fotsiny tamin'ny fanoherana ireo tetikasan'ny governemanta ny vondrompiarahamonin'ireo mpampiasa aterineto, fa koa nanolotra sosokevitra ho enti-manorina sy manatsara zavatra hiatrehana ny olan'ny resaka vetaveta sy famiraviràna ankizy, tsy ilàna akory mametraka rafitra sivana na fanohintohinana ny fahalalahana nomen'ny lalampanorenana. Nanaovan'ilay vondron'asa momba ny sivana fanapofoana ireo vahaolana hafa azo isafidianana, ohatra ny fisintonana ao anatin'ny 12 ora ireo tranonkala maherin'ny 60 misy votoaty vetaveta sy famiraviràna ankizy, amin'ny fandefasana tsotra fotsiny imailaka any amin'ireo mpanolotra tolotra fidirana aterineto iraisampirenena, izay hanaisotra ireo votoaty tsy ho ao anaty aterineto. Voarakitra ao anatin'ireo lisitra mainty avy amin'ireo firenena hafa voatanisa ao amin'ny Wikileaks ireny tranonkala ireny. Io fanehoana io dia mampiseho ireo tohankevitra fototra avy amin'ireo mpanohitra : raha tokony ho ampiasaina amin'ny fomba mahomby ny fotoana sy ny asa mba hanaovana izay hanesorana ireo votoaty tsy ara-dalàna ao amin'ny aterineto, ny governemanta alemàna kosa misafidy ny sivana sy ny fibahanana – vahaolana mora sy mampididoza. Ny tena atahoran'ireo mpanohitra dia, vantany vao ampiharina io, sao koa ilay rafitra ho ampiasaina hanivànana ireo endrika votoaty hafa tsy lanilanin'ny vavony, fa tsy ireo miresaka vetaveta sy famiraviràna ankizy ihany. Toa efa miandry sahady ny anjara firotsahany an-tsehatra ireo pôlitisiàna alemàna, miaraka amin'ny lisitry ny votoaty izay tian-dry zareo hosivanina amin'ny hoavy – sosokevitra miainga amin'ireo tranonkala filalaovana mampiasa vola ka hatramin'ireo tranonkala islamista, mandalo amin'ireo first person shooters (FPS, kilalao kitifitifitra), raha ireo orinasa momba ny mozika indray dia mihoby manoloana ilay hevitra hoe mba hobahanana amin'izay ny pirate bay sy ny p2p.
Raha te-hahazo ny lisitra feno misy ireo rohy tamin'ny adihevitra zensursula, ato jerena (fiteny alemàna).
Isaoran'ny mpanoratra i Geraldine de Bastion izay namadika ny lahatsarotra ho amin'ny fiteny anglisy, Suzanne Lehn ho amin'ny fiteny frantsay (fototra nakàna ny dika ho amin'ny fiteny malagasy)
Navoaka ihany koa tao amin'ny netzpolitik.org.
Fanoherana 02 Febroary 2020